တစ်ချိန်က နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေစွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ မင်းသား ခုတော့ ကလေးတွေတောင်ရနေပြီနော်သိကြသေးရဲ့လား ပရိတ်သတ်ကြီး – All Update News
တစ်ချိန်က နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေစွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ မင်းသား ခုတော့ ကလေးတွေတောင်ရနေပြီနော်သိကြသေးရဲ့လား ပရိတ်သတ်ကြီး
တစ်ချိန်က နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေစွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ မင်းသား ခုတော့ ကလေးတွေတောင်ရနေပြီနော်….
အမြဲလို အနစ်နာခံပြီး ဆိုးတူကောင်းဖက်လက်တွဲမဖြုတ်တဲ့ချစ်ဇနီးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ဆု တောင်းပေးခဲ့တဲ့ မိုင်းမိုင်တစ်ချိန်က မိန်းက လေးပရိသတ်တွေကြား သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ မော်ဒယ်လ် မိုင်းမိုင်ကို ပရိသတ်ကြီးအားလုံး မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
မိုင်းမိုင်ကတော့ အောင်မြင်နေဆဲအချိန်မှာပဲ အနုပညာလောကကနေ လုံးဝထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်ပြုသွာ းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက မိုင်းမိုင်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်မျှော်ခဲ့ပေမယ့် မိုင်းမိုင်ကတော့ အနုပညာလောကနဲ့ လုံးဝအဆက်ပြတ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးဖေဖေတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ မိုင်းမိုင်ဟာ ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်သူသက်ထားရဲ့ မွေးနေ့ကို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုင်းမိုင်က “Happy birthday နော် မိန်းမ ရေ love u so so much 👑👑👑🎉🎉🎉🎁🎁🎁❤️❤️❤️❤️ အမြဲလိုပင် အနစ်နာခံ သည် းခံပြီး ချစ်ခြင်း တွေ နဲ့ ပွေ့ဖက်ထားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ❤️❤️❤️❤️” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆု တောင်းပေးလာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်းမိုင်ကတော့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း (၇) နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ သားသမီးသုံးယောက်ထွန်းကားနေပြီဖြစ်ပြီး သာယာတဲ့အိမ် ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း မိုင်းမိုင်ရဲ့ ယခုလက်ရှိပုံရိပ်လေးကိုကြည့်ပြီး တစ်ချိန်က ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကချင်မင်းသားလေး မိုင်းမိုင်ကို ပြန်လည်အ မှတ်ရ သွားကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
တစ္ခ်ိန္က ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြစြဲလမ္းခဲ့ရတဲ့ မင္းသား ခုေတာ့ ကေလးေတြေတာင္ရေနၿပီေနာ္….
အၿမဲလို အနစ္နာခံၿပီး ဆိုးတူေကာင္းဖက္လက္တြဲမျဖဳတ္တဲ့ခ်စ္ဇနီးေလးရဲ႕ေမြးေန႔ေလးကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအျပည့္နဲ႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ မိုင္းမိုင္တစ္ခ်ိန္က မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြၾကား သည္းသည္းလႈပ္ခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ေမာ္ဒယ္လ္ မိုင္းမိုင္ကို ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး မွတ္မိၾကဦးမယ္ထင္ပါတယ္။
မိုင္းမိုင္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနဆဲအခ်ိန္မွာပဲ အႏုပညာေလာကကေန လုံးဝထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳသြာ းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြက မိုင္းမိုင္ရဲ႕ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ မိုင္းမိုင္ကေတာ့ အႏုပညာေလာကနဲ႔ လုံးဝအဆက္ျပတ္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ကေလးေဖေဖတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ မိုင္းမိုင္ဟာ ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ သူ႔ ရဲ႕အိမ္သူသက္ထားရဲ႕ ေမြးေန႔ကို ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
မိုင္းမိုင္က “Happy birthday ေနာ္ မိန္းမ ေရ love u so so much 👑👑👑🎉🎉🎉🎁🎁🎁❤️❤️❤️❤️ အၿမဲလိုပင္ အနစ္နာခံ သည္းခံၿပီး ခ်စ္ျခင္း ေတြ နဲ႔ ေပြ႕ဖက္ထားေပးလို႔ ေက်းဇူးပါ ❤️❤️❤️❤️” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းေပးလာတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
မိုင္းမိုင္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္သက္တမ္း (၇) ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ သားသမီးသုံးေယာက္ထြန္းကားေနၿပီျဖစ္ၿပီး သာယာတဲ့အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးလည္း မိုင္းမိုင္ရဲ႕ ယခုလက္ရွိပုံရိပ္ေလးကိုၾကည့္ၿပီး တစ္ခ်ိန္က ခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ ကခ်င္မင္းသားေလး မိုင္းမိုင္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရ သြားၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
Previous Article သားနဲ့သမီးလေးတို့ရဲ့ တစ်မျိုးစီရှိတဲ့ အကျင့်သဘာဝတွေကြောင့်အားကိုးရဖို့ မျှော်လင့်နေကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
Next Article အသားအရေကြောင့် ကလေးဘဝက အမြဲအနှိမ်ခံရပြီး ငိုကြွေးနေခဲ့ရသောဘဝမှ လူတိုင်းအားကျရသည့် မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည့် ကောင်မလေး